Isaaq kulmay mise wada hadal | allsanaag
Musse Biixi oo Muqdisho uu diray Wafti hor dhac ah ee ka qayb qaadanaya wada Hadalka xaaraanta ah
Waxaa maanta gaadhay magaalada muqdisho ee caasimada dalka Soomaliya waftiIsaaq ah oo uu hogaaminayo Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ah la taliyaha Muuse Biixi ahna golaha fulinta dhexe ee xisbiga talada haya ee maamulka beelaha Isaaq . Jabhadka Maxamed Cabdilaahi cumar ayaa booqday Madaxtooyada Soomaliya ee Villa Soomaliya isaga oo la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxameda cabdulaahi Farmaajo isaga oo warqad ka siday gacan ku dhiigle Muuse Biix .
Waftigan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee u yimaada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ah meesha dalka Soomaliya laga xukumo.
Warar kale ayaa sheegaya in madaxweyne FARMAAJO Farmaajo uu aad ugu farxay waftigan ka soo jeeda beesha Isaaq ee yimid Muqdisho oo uu hogaaminayo Maxmed Cabdilaahi isaga oo u balan qaaday in guud ahaan dalka dib u heshiisiinta la samayn doono aan horay loo arag. Waxuuna waraqad culus u soo dhiibay Muuse Biixi isaga oo warqaad ka soo qaaday MD Farmaajo, waxaana la ogayn waxa ku qoran labadan warqadood eel a is dhaafsaday, Waxaana hubaal ah in laga gudbay Mobilada la dhagaysto ee Beesha Caalamku ay si toos ah ulla socotoa waxkasta oo lagu wado hadlay. Tan ayaa keenay in waraaqo la isku dhaafso diyaarahada oo wafti la isku soo diro.
← 30 Gaari oo Lagu Wareejiyey Wasiirka Amniga KHIYAANO QARAN →